टिकटकमा मुुठ्ठी ठोक्काएर गरिबलाई पैसा बाड्ने गिविना, के छ उनको यति ठूलो आयस्राेत ? – Dainik Samchar
January 6, 2022 4389
टिकटकमा सेवानै धर्म हो भन्ने मनकारी जो गरीब, दुःखीको भगवान भएर निकै भाइरल छिन् ।
जो हातमा मुठ्ठी पारेर द्ववांग हान्न लगाउदै सडक पेटीमा सुत्ने भोका, गरीब र असक्तलाई खुल्ला मनले सहयोग गर्ने गर्छिन् को हुन् त ती युवती ?
पोखरामा बसोबास गर्ने २४ वर्षीया गिभिना पेशागत रूपमा शिक्षिका पनि हुन। आफ्नो खाली रहेको समयमा उनले टिकटकमा अरुले भन्दा भिन्नै किसिमको भिडियो बनाएर अपलोड गर्छिन। भिडियोमा उनले सडकमा जिवन बिताइरहेका मानिसहरूलाई आर्थिक सहयोग देखि खाने कुरा तथा कपडाहरु दिएर सहयोग गरेको देख्न सकिन्छ ।
टिकटकमा धेरै किसिमका भिडियोहरु हेर्न सकिन्छ तर सोसल मिडिया बाट पनि एक किसिमको सहयोग र सन्देश दिन सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हुन उनी । तर उनको ब्यक्तीबारेमा धेरै कुरा भने बाहिरिएको छैन ।
यो पनि – २०२२ मा आमा बन्दै यी अभिनेत्रीहरू
सन् २०२२ सुरू भएको छ । वर्षको सुरुवातमा नै बलिउडका फ्यानले सुखद समाचार पाइरहेका छन् । बलिउडका केही अभिनेत्रीहरु यो वर्ष आमा बन्दैछन् । यो सूचीमा टेलिभिजन अभिनेत्री भारती सिंहदेखि दक्षिण भारतीय फिल्म अभिनेत्री काजल अग्रवालसम्म छन् ।
कमेडी स्टार भारती सिंह पनि गर्भवती छिन् । उनले आगामी अप्रिलमा पहिलो सन्तानलाई जन्म दिँदैछिन् ।
टेलिभिजन अभिनेत्री पूजा बनर्जीको आमा बन्ने तयारी छ । हालै उनले आफ्नो बेबी बम्प सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । क्रिकेटर हार्दिक पाण्डेकी पत्नी तथा अभिनेत्री नताशा स्तानको विकले पनि क्रिसमसमा आफ्नो बेबी बम्प तस्वीर सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।
कन्नड फिल्म अभिनेत्री सञ्जना घलरानी पनि हालका दिनमा गर्भवती छिन् । यो कुराको खुलासा उनले हालै एक मिडियो पोर्टलसँगको कुराकानीमा गरेकी थिइन् ।
Prevकाठमाडौंमा मोटरसाइकल दुर्घटना, एक युवतीको मृत्यु युवक गम्भीर घाइते !
तनुहँमा पल शाहको बयान: कोठामा गइ ढोका धकेली भित्र पसेको हुँ, उनलाई बियर खान दिइ, फेसवास लिएर म त्यहाबाट निस्किए
अभिनेत्री मानन्धर र पूर्वमन्त्री सिंह आफ्नो समूहसहित भोलि एमाले प्रवेश गर्ने